Muslimiin lagu weeraray Masaajid ku yaala dalka New Zealand – AwKutub News
Muslimiin lagu weeraray Masaajid ku yaala dalka New Zealand
By awkutubnews March 15, 2019
Leave a Comment on Muslimiin lagu weeraray Masaajid ku yaala dalka New Zealand
Wararka ka imaanaya dalka New Zealand ayaa sheegaya in muslimiin badan lagu dilay Masaajid ay ku tukanayeen oo ku yaala Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand.
Ku dhawaad 200 ruux ayaa ku tukaneysay masaajid Al Nuur ee Magalada Christchurch, waxaana la sheegayaa in khasaaro xoogan uu gaaray dadka ku dukanayay goobta weerarka uu ka dhacay.
Dadka goobjoogayaasha ayaa sheegaya in weerarka uu ka dhacay Masaajid lagu tukanayay Salaadii Jimcaha, waxaana khasaaraha ugu badan uu gaaray dadka ku tukanayay qeybta dambe ee masaajidka.
Ruuxa weerarka geystay oo u dhashay dalka Australia ayaa la sheegay in lagu magacaabo Brenton Tarrant oo 28 Sano jir ah, waxaana weerarka ka hor la sheegay inuu damiyay korontada Masaajidka.
Brenton Tarrant, ninka weeraray Masaajidka
Ciidamada ayaa isku gadaamay goobta ay wax ka dhaceen, waxaana warar hordhac ah oo soo baxaya ay sheegayaa in rag Soomaaliyeed ay qeyb ka yihiin dadka weerarka ku dhintay, kuwaasi oo xaafadda deganaa.
Ra’iisul wasaaraha New Zealand ayaa weerarka ku tilmaamtay inuu yahay mid kamid ah maalmihii Madoobaa ee dalkaasi, waxaana laamaha amaanka ay wadaan baaritaanka waxyaabaha ka dambeeyay weerarka.
Waxaa la sheegayaa in dadka ku dhintay weerarka ay yihiin kuwo dhawaad 40 qof oo muslimiin ah, ayadoo loo qabtay 4 qof oo lagu tuhmayo inay ka danbeeyeen weerarka ka dhacay masaajidka ku yaala dalka New Zealand.
Tags: argagixiso Caalamka Muslimiin New Zealand Wararka Weerar
Previous Entry Madaxweynaha Faransiiska oo ku yimid Kenya